EYEMFUDUKO 27 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
EYEMFUDUKO 27EYEMFUDUKO 27
271“Ke lona iqonga lamadini uze ulenze ngomngampunzi lilingane macala, libe ziimitha ezimbini neesentimitha ezimashumi mabini ubude ngokunjalo nobubanzi, ukuphakama kube yimitha enye neesentimitha ezimashumi mathathu. 2Izibonda zeekona zalo zone mazilabalabe phezulu phaya, zenze iimpondo, futhi ke zityatyekwe ngobhedu. 3Lenzele iimbiza zokukhongozela olo thuthu lunamafutha, wenze neefotsholo, izitya, iifolokhwe, neepleyiti zomlilo. Zonke ke ezi zixhobo mazenziwe ngobhedu. 4Thatha ubhedu, wenze isisefu, uze usenzele amakhonkco ezikoneni zone. 5Esi sisefu sifake phantsi kongqameko olujikeleze iqonga, ngohlobo lokuba sithathe isiqingatha sokuphakama kwalo. 6Yenza imiqobo yokubamba ngomngampunzi, uyityabeke ngobhedu. 7Yifake macala kuloo makhonkco, ibe ziindawo zokuphatha. 8Lenze libe ngumhaba-haba nje wamaplanga, ngokwalaa ndlela ndandikubonise ngayo entabeni.”
9“Esi *sibingelelo ke senzele inkundla ngomkhusane owenziwe ngelaphu elisontwe ngobuchule. Ngezantsi malibe ziimitha ezingamashumi amane anesine ubude. 10Umkhusane lo mawume ngeentsika zobhedu ezimashumi mabini, ezixhaswe ziziseko zobhedu ezimashumi mabini, zibe namahaki nemiqadi eyenziwe ngesiliva. 11Uya kwenza kwangolu hlobo ke nakwicala langasentla. 12Kwicala lasentshona umkhusane mawube lilaphu eliziimitha ezimashumi mabini nambini ubude, ube neentsika ezilishumi ezixhaswe ziziseko ezikwalishumi. 13Ngasempuma kwicala lesango umkhusane mawube kwaziimitha ezimashumi mabini nambini ububanzi. 14-15Ngapha nangapha esangweni ilaphu malibe ziimitha ezintandathu neesentimitha ezimashumi mathandathu, ime ngeentsika ezintathu ezixhaswe ziziseko ezithathu. 16Inkqu yesango ke yona yovalwa ngelaphu eliziimitha ezilithoba ubude, elisontwe ngobuchule. Malibe yile mibala: ozuba, omsobo, nobomvu; liqhoqhonywe ngobugcisa nobunono. Loxhaswa ziintsika ezine ezimi ngeziseko ezine. 17Xa zizonke iintsika zenkundla le zodityaniswa ngemiqadi yesiliva, aze namahaki enziwe ngesiliva; ke zona iziseko zibe zezobhedu. 18Ubude bale nkundla mabube ziimitha ezingamashumi amane anesine, ububanzi zibe ngamashumi amabini anambini, ukuphakama ke kona ibe ziimitha ezimbini neesentimitha ezimashumi mabini. Umkhusane mawenziwe ngelaphu elisontwe ngobuchule, ke zona iziseko zenziwe ngobhedu. 19Xa zizonke izixhobo zesibingelelo ngokunjalo nezenkundla, nditsho nesikhonkwane sembala, mazenziwe ngobhedu.”
20“Yitsho amaSirayeli eze neyona icwengileyo ioyile yomnquma, khon' ukuze isibane sihlale sivutha njalo-njalo. 21Kweli cala linganeno phambi komkhusane wetyesi yomnqophiso, uAron noonyana bakhe mabasoloko bejonge ukuba izibane ziyavutha phambi *koNdikhoyo, ukususela ngorhatya kude kube kusasa. Lo mmiselo ke mawuhlale uthotyelwe nanini na ngamaSirayeli nezizukulwana zawo.”